Yaan ahay? Part 1: Beautiful Laakiin jajabay — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ka fikir Bourne Aqoonsiga The. Ninkan tooso Doonta oo garan maayo cid uu yahay. Waxa uu helaa fikrad ah iyo aado Switzerland. Waxa uu helo in dagaal iyo ogaaday in uu u tababaran ee la dagaalanka. Ma rabtaa ma noqon waalan haddii aad kala sooc lahayn ogaaday aad xirfadaha qarsoodi ah Ninja? Waayo, inta kale ee filimka uu Safar ah in la ogaado cida uu yahay. Waxa uu awood u wax ma uu xitaa ogeyn oo ku saabsan. Laakiin hadii uusan iyada u aqoonsanno, isagu ma uu awoodi doono inuu ku noolaado sida uu dhab ahaan yahay.
Anigu ma aan qaadan aadan qof ee qolka this leedahay xirfadaha qarsoodi ah Ninja, laakiin waxa weli muhiim u ah noo qabaa ku saabsan aqoonsiga.
Sidee waannu og nahay our aqoonsiga uu leeyahay wax badan in la sameeyo iyo sida aan u fuliyaan nolosheena. Waxaan ula jeedaa, ha ku garanayaa kii aad tahay oo aadane ah? Taasi micneheedu waa maxay? Ma og tahay sababta aad halkan u joognaa, waxa muhiimadda waa, waxa aad awood u, waxa aad u malaynayeen in la samaynaya? Maxaad xitaa jira? Yaad tahay? Haddii aynaan ka jawaabaan su'aalaha kuwaas oo aan baabba 'ayaa laga yaabaa nolosheena, ku nool sida qof kale.
Waa wax laga xumaado marka ciyaartoyda pro dhaawacanto ama u leeyihiin in ay ka fariisto, ka dibna ay ka lumay inta ka dhiman noloshooda. Maxaa yeelay, dhammaan markan waxay u maleeyeen aqoonsigooda isagoo ciyaaryahan ah. Taasi waa sida kuwa kale oo loola dhaqmo, waana waxa ay isku duubay. Sidaas darteed haddii taasi cidda ay yihiin, taasi waxa weeye waxa ay ku shub doonaa noloshooda galay. Oo haatan in ay ka tageen waxba in ay ku noolaadaan waayo, waxay.
Oo waxaa jira Mudanayaal dhallinyarada ahaa oo u tagaan ka xiriirka xiriirka, kuwaas oo noqon waalneyn ay muuqaalka. Maxaa yeelay, waxay u malaynayaan in ay aqoonsi lagu soo koobay in isagoo gabadha quruxsan in guys u eg. Oo markii caan in baaba'ayso, ay la jajabiyey. Taasi halkaas oo ay ka heleen Ujeedada. Haddii aad wareersan oo ku saabsan qofka aad tahay, aad noqon doonaa qasan oo ku saabsan waxa ay tahay in aad loo la samaynaya nolosha-iyo in yeelan karaan natiijooyin naxdin leh.
Maxaad dhihi lahaa haddii aan ku weydiiyey qofka aad tahay? Ardayga ama Orodyahanka ama heesaa ama wadaad? No, kuwa jira waxyaabo aad sameyn. Yaad tahay?
Waxaan ma u sheegi kartaa dunidu ina qeexaan. Waxaan ma u sheegi kartaa saaxiibo noo qeexaan. Waxaan ma u sheegi kartaa waalidka noo qeexaan. Waa inaan Ilaah yuusan nala qeexaan sababta oo uu amar ku saabsan arrinta. Haddii garan mayno cidda aynu nahay, waxaan aan ku noolaan karaan nolol habka aan loogu tala galay in ay ku noolaadaan ayaa.
Waxaan la hadlay oo ku saabsan yaabaa a million wax Qorniinku wuxuu leeyahay nagu saabsan, laakiin waxaan lahaa si ay u kala qaybi saddex. mid ka mid ah ayaa marka hore in aynu ka hadli doonaa oo ku saabsan in cutubkan waxa weeye in aan si qurux badan dhigay, laakiin jebisay. Taasi waa meesha ugu weyn ee casharka this: oo dhan oo naga mid ah waxaa si qurux badan dhigay, laakiin jebisay.
Oo anigu waxaan doonayaan in ay eegaan Sabuurradii 139 ugu horeysay. waxaa noqda haddii aad leedahay SIM aad. Inta aad soo jeedin, waxaan idin siin doonaa qaar ka mid guud oo kooban.
Sabuurradii Tani dhan yahay oo ku saabsan sida Ilaah wuxuu og yahay wax kasta oo meel kasta waa waqti isku mid ah. Wuxuuna ogyahay markii Daa'uud hoos fadhiya iyo markii uu ka soo baxdo. Wuxuu ogyahay Eebe waxa uu u socdaa in la yidhaahdo ka hor inta uusan ku leeyahay. Oo isna meel waqti isku mid ah. Waxa uu jannada ku jira, Waxa uu dhulka, Waa meel kasta. Markaasaa Daa'uud wuxuu ammaanay Ilaah, waayo,.
Markaas bilaabo aayadda 14 wuxuu ammaanay Ilaah sida wax abuura ee. Oo isna wuxuu ina siinayaa wax fikrad ah oo wuxuu galay kuwa aan nahay.
Waxaan idinku ammaanayaa sababtoo ah waxaan ahay cabsi iyo yaab badan sameeyey; shuqulladiinna waa yaab, Waan ogahay in si fiican oo buuxda. My kaama qarsoonayn aad, Markii laygu sameeyey meeshiisa qarsoon. Markii aan isku wada tidcan ee dhulka moolkiisa, indhihiinnu arkeen jidhkayga Midaan. Oo maalmaha amreen ii lagu qoray buugga ka hor mid ka mid ah u yimid inuu noqon. (Sabuurradii 139:14-16, NIV)
Ilaah inaga dhigay. Taasi waa biloowga of our aqoonsiga, oo waa in aanu ku nool nahay light of xaqiiqda ah in.
Waxaan la sameeyey by Ilaah
Haatan waxaan ahayna dadka intooda badan halkan caawa la fahmo in Ilaah waa abuuraha. Annaga midkayana abuuray nafteena. Hase yeshe, waxa badan odhan, ma waxaan ku jirnaa halkan kadis ama fursad. Taasi si fog-soo kaxeeyey oo aan la rumaysan karin. Waxaan si ula kac ah loo abuuray by Ilaah. Oo ma ahan wax aan qiimo lahayn. Waxay ka dhigaysa farqi nolosheena iyo Sawira aqoonsiga our.
Laakiin waxaan rabnaa in aad qiyaasi daqiiqad in Ilaah inama uu abuuro. halkan Waxaad tahay by fursad random. Ma jirto ujeeddo ula kac ah aad u jiritaanka. Haddaba isku day in aad ka jawaabto su'aashaas, waxa halkan waayo, waxaad tahay? nolosha Our lumin macnaha iyo qiimaha oo dhan marka ay shil random. Taasi waxay ka dhigan tahay qoyska aanu run ahaantii ma macnaheedu wax, anshaxa waa mid ujeedo, jeer aan adag ujeeddo lahayn. Waa hab quruxsan nixiyay si aad u aragto dunida. Oo nasiib wanaag, waa run. Our abuura ayaa naf ahaantiisa muujiyay noo ee eraygiisa.
Xaggee baad ka timid badan oo ku saabsan qofka aad tahay ayaa sheegay in. Sidaas darteed haddii aan heli qalab qalaad oo aanan fahmi karaa waxa la sameeyo waxa la, kuwaas oo ah qofka ugu fiican inaad weydiiso? Qofka u sameeyey. Waxay ii sheegi kartaa waxa ay tahay iyo waxa ay tahay, waayo,. Waxaan rabnaa in aan ka maqalno noo abuuray, yaa inaga dhigay.
aayaddan 14, David ayaa sheegay in uu yahay "cabsi iyo yaab badan sameeyey." Maxaa loola jeedaa in?
Maxay ka dhigan tahay in la cabsi dhigay? Waxaa loola jeedaa Ilaah uma kaliya na soo wada tuurin. Waxay u ahayd muhiim isaga in. Waxaa ina sameeyey isaga sharaf weyn iyo cabsi. Waxa aan ahaa qasay.Shacabka ama random. Indhahaagu buluug waa on Ujeedada, ama maqaarkaaga brown, ama lugaha dheer. Dhammaan waxay ahayd on Ujeedada.
Waxaan xasuustaa isagoo fasalka tahay dugsiga dhexe, iyo wax walba oo aan sameeyey ahayd xun, laakiin ma on Ujeedada. Waxaa jira baaquli this hooyaday ayaa weli on shelf ee gurigeena. Waa wax ku Caaasimadda aad abid arki doonaa. Ma ahan in aanan awood u wanaagsan samaynaya. Waa sababtoo ah ma aanan daryeel ku filan oo ku saabsan in ay dhab ahaantii waqti siisaan. kaliya waxaan doonayay ilaa degdegay oo ku dhameysan sidaas inaan saaxiibbadayda la hadli kartaa. Ilaah uma kala sooc lahayn na soo wada tuurin. Wuxuu ku samayn jiray daryeelka weyn. Waxa uu si taxadar leh aad gurato. Ka fakar sculptor xirfad leh, si taxadar leh iska chiseling ilaa uu masterpiece waa qurux.
Markaasaa Daa'uud wuxuu sheegay in uu ahaa "yaab badan sameeyey." Waxa ay la micno ah inuu shaqo weyn. Waxaan nahay cajiib ah xayawaan. Bani'aadamku waa cajiib.
Waxa uu ku dhaco in la yidhaahdo, “shuqulladiinna waa yaab, Waan ogahay in buuxa si fiican.” Waxa uu ammaanay Ilaah shuqulladiisa yaabka badan. Ilaah waa abuuraha la yaab leh. Waxa uu sameeyey waxyaalo yaab leh. Oo innagoo ah kuwa shuqulladiisa yaabka badan Ilaah waa. Dhab ahaan, nahay ugu yaabka leh oo dhan oo iyaga ka mid.
Waxaan la yaabanahay haddii aad la siiyo Ilaah ammaanta inuu u qalmo Iyo shuqulladiisa yaabka badan? Bani'aadamku waa cajiib. Dhakhaatiirta ayaa weli isku dayaya in ay fahmaan nidaamka adag in uu yahay jidhka bini'aadamka. A dhowr sano ka hor waxaan lahaa jeex ee aan sambabada oo aan neefsan kari waayay. Waxaan jiifay sariirta isbitaalka, iyo dhakhaatiir ma lahayn inuu wax ku sameeyo sababtoo ah jidhkayga hore daryeelka waxaa ka mid ah. Dhowr maalmood ka dib waxaan ku jiray ganaax. Waxaan nahay cajiib ah. Waxaan jebisay, laakiin weli cajiib ah.
Dabcan, dadka ku Xusaan wax xayawaanka samayn karaa in aynaan awood, sida xayawaanka in ordi karaan si degdeg ah ama waxay leeyihiin xoog badan. Sida aynu ognahay nahay qaybta ugu cajiibka ah uunka?
Waxaan ka abuuray araggiisa! xoolaha No, ama warshad, ama gabal dalkii, ama meeraha loo abuuray ekaanshaha Ilaah. Waxa uu inaga dhigay inay isaga oo kale! Ilaah wuxuu abuuray wax kasta si ay u muujiyaan off Ammaantiisu, iyo nahay qayb ka mid ah Abuuridda in uu helo si ay u muujiyaan off ugu cad, maxaa yeelay, waxaynu nahay qayb ka mid ah in la sameeyey isaga oo kale ah.
Haddaba ka fikir in. Taasi waa ujeedada ugu weyn ee idiin ah nolosha: si ay u muujiyaan off Ilaah. Waxaan akhriyey mid qoraaga in na la barbar dhigo Sidaana. Waxaan nahay sida Sidaana Ilaah ee abuurka. Ma nihin Ilaah, laakiin aynu ku jirno isaga oo kale ah. Waxaan isaga u matalaan oo aan ka helno si ay u muujiyaan sawir yar isaga. Waxaan jeclahay in image.
Sidaas waxa? Our dhaqanka si joogto ah wax barayay wuxuu kuu noqon carada. Waxaad u baahan tahay. Waxaad ma tahay quruxsan ku filan, buff ku filan, caato ku filan, qurux ku filan, caqli ku filan, ama ciyaaraha fudud ku filan. aad Well aadan kaamil ah, laakiin waxaa cabsi iyo yaab badan sameeyey aad.
Waxaan doonayaa in aad si aad u hesho raalli in in. The guys ama gabdhaha waxaa laga yaabaa in aan u malaynayaa in aad tahay qof soo jiidasho leh, laakiin aad ogtahay waxa aad cabsi iyo yaab badan sameeyey. Waxaa laga yaabaa in aadan ugu xaragada ah, laakiin waxaa cabsi iyo yaab badan sameeyey aad. kaftanka Your laga yaabaa in corny, laakiin waxaa cabsi iyo yaab badan sameeyey aad. Waxaad waa yaab ah, yaab, abuuridda cajiib ah oo Ilaaha Qaadirka ah. Oo wax ka soo qaadan kartaa!
Qaar ka mid ah oo naga mid ah wax aad u yar oo nafteena u malaynayaa. Waxaan qabaa waxba nahay. Taasi waa been. Waxaad cabsi iyo yaab badan sameeyey. Ha u ogolaan qof kuu sheegi haddii kale. Maxaa Ilaah u maleeyo badan oo ka badan waxa aad ama dadka kale u malayn kartaa arrimaha.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah oo aad u badan oo nafteena u malaynayaa. Ka fikir Kanye West. Waxa uu helo in wax badan oo dhibaato, laakiin waxaas waxaa uu sheegay in wixii qof kasta oo kale hore u maleeyo. Waxa uu leeyahay song lagu magacaabo "Anigu ma waxaan ahay Ilaah." Sidaas dad badan this heer sare ah u malaynayso in naftooda. Laakiinse idinku waxaad tihiin kaliya uun a. Ilaah keliya maahee waa abuuraha.
Tani waxay sidoo kale leedahay iman kara sida aan u arko dadka kale. Qofna waa buray. Qofna waa qiimo lahayn. Qof walba waxa uu cabsi iyo yaab badan sameeyey. Marka aad noqotay in nin guri la'aan dariiqyada, xusuuso uu ahan qofna a. Waxaa jira, waxan oo kale sida qofna a.
Waxaan loo yaqaan by Ilaah
qof ee halkan ma babysit? Waxaan leeyahay wiil dhalinyaro ah, iyo markii aniga iyo xaaskeyga waan rabaa in aan aado taariikhda a waxaan ku khasbannahay in jadwal sida saddex sano ka hor si aan ka heli kartaa Carruur ah. Laakiin waxaan bixin dadka si ay u daryeelaan wiilkayagii halka aan tegey. Carruur-indhaha ay waxyaalaha ku jira oo ay ku jiraan daryeelka. Waa hagaag oo dhan of abuurka waa in daryeelka Ilaah. Oo Isagu wuxuu dhawraa Indhihiisu oo dhan waxaa ka mid ah, aad oo ay ku jiraan.
Ilaah kaliya ma abuuri wax kasta oo markaas ha tagee. Ilaah waa dambaysta la ogyahay wax kasta oo socda.
“My kaama qarsoonayn aad, Markii laygu sameeyey meeshiisa qarsoon. Markii aan isku wada tidcan ee dhulka moolkiisa, indhihiinnu arkeen jidhkayga Midaan.” (Sabuurradii 139:15-16)
Waxa uu sheegay in tan iyo markii uu uurka Ilaah wuxuu arkay isaga. Dabcan, halka uu uurka in mid kale ma jiro isaga ka arki kartaa. Iyagu ma ay aqoon badan isaga ku saabsan weli. Laakiin Ilaah wuxuu arkaa isaga, xitaa markii uu ahaa oo kaliya size of laws ah. Ilaah waa daryeelka isaga u, isaga soo gaaray, isaga wada tolida.
Marka aniga iyo xaaskeyga waan ogaaday waxay ahayd uur, waxaan u baxay inuu dhakhtarka Monday soo socda. Oo aynu hore u maqli kartay oo wadnaha ah. Waxa uu ahaa sidaas u yar, laakiin Ilaah jecel yahay isaga, oo waxaa isaga samaynta. Ilaahna wuxuu arkay in uu yar jirka Midaan. Ma jiraan wax Badbaaday view Ilaah waa.
Haddii Eebe hilmaamay adiga kugu saabsan, waxaad ogaan lahaa. Isagu wuxuu dhawraa qalbiyadeenna ku garaaceen iyo sambabada neefsashada.
Ma jiro qof naga mid ah waa la arki karin. Ilaah na arka oo waa qoto dheer xiiso u nolosheena. Tani waxay noqon waa Raaxada noo. Ma jiraan wax aan tegi karo iyada oo Ilaaha quduuska ahna waxaa aan ka war. Waxaa jira tartan jirin ama dhaawici. Ilaah dan ah oo ku saabsan waxyaalaha kugu yeelo. Ma aha in aad si ay ula dagaalamaan for muhiimadda-you're hore u muhiim ah.
Maxaa dhacaya haddii aad jeceshahay fanaanada magacaaga soo TV yeedhay, ma in uu noqon doono mid cajiib ah? Xitaa haddii aad marnaba in ay ruxaan gacanta, waxa uu noqon lahaa ku filan in ay kaliya garanayay kii aad ahaayeen. Intee ka sii badan la yaab leh in Ilaah wuxuu og yahay cidda aynu nahay. Sow waajib ma aha in ku filan?
“Oo maalmaha amreen ii lagu qoray buugga ka hor mid ka mid ah u yimid inuu noqon.” (Sabuurradii 139:16)
My Aabaha isticmaalaa in la yidhaahdo wax kasta oo la ii sheegay in eryay ii waalan. Waayo, mid wax, uu ku noqon lahaa hadal kasta oo aan u sameeyey galay nooc ka mid ah khatar. Laakiin wax kale oo uu dhihi jireen waa, “Boy, Waan idin aqaan inaan ka fiican tahay in aad naftaada og.” Waxaa ka dhigi lahaa ii sidaas waalan. Laakiin markaas hal maalin waxa aan ogaaday in uu ahaa mid run ah. maxaad? Iyagu maskaxda kid yar aynan karaa waxyaabo. Laakiin aabahay ogaa.
Ilaah wuxuu og yahay wax nagu saabsan in xitaa garan mayno, maxaa yeelay, annagu kala ma tahay isaga. Our yar maskaxda aadanaha aynan garan karin wax walba oo.
Waxa uu sheegay in Ilaah ogaa wax walba oo uu samayn lahayd ka hor xitaa uu ku dhashay. Ilaah xukunto wax kasta oo uu og yahay WAX KASTA. Waxa uu ogyahay sida badan yihiin timaha waa madaxa kuu saaran. Wuxuu ogyahay Eebe waxa aad hadda ku fikiraya. Wuxuu ogyahay Eebe waxa aad samayn doonaa caawa iyo berri. Kaliya Ilaah laga garan karin wax badan oo ku saabsan oo dhan toddoba bilyan oo dadka dhulka.
Tani waa sababta aannu dhawrnaa in Kitaabka Quduuska ah inaad noo sheegto cidda aynu nahay. Maxaa yeelay, Ilaah waa kan ina sameeyey isaga oo uu noo sheegi kartaa. Waxa uu na og yahay ka fiican kuwa aan samayn
Tani waa amaan! Isagu ma uu jeclaan. Ilaah ayaa marna wax ka soo helay. Waxa uu marna khalad. Waxa uu marna la yaabay. Waxa uu marna lahaa inay fiiriyaan wax. Waxa uu marnaba go'aan ka hor inta aadan is dhamaan xaqiiqooyinka. Wuxuuna ogyahay wax kasta oo!
miyuusan dhigi aad rabto in aad isaga ku kalsoon tahay?
Waxaa waa in. Laakiin sida aan hore u soo sheegnay, qaar ka mid ah oo naga mid ah u malaynayaa in aad u heer sare ah oo nafteena. Iyo in inta badan sababtoo ah waxaan illoobi saddexaad qayb this. Waxaan iloobin in aan sidoo kale jebiyey.
Waxaan waa jajabaan
Waxaan kaliya ma ahan si yaab leh ka dhigay; waxaana sidoo kale jebiyey. Kitaabku waxa uu leeyahay aan la abuuray by Ilaah oo uu image. Waxaan ahaayeen hufan oo si fiican u xiran Ilaah. Laakiin marka dembiga dunida ugu soo galay, waxa saamaysay oo dhan oo naga mid ah. Oo intii aan inuu noqdo oo dhan loo isticmaalo, hadda waxaan jebiyey. Our dayrta la mid tahay farshaxan qurux badan crystal la hoos. Waa in xabbadood. Hadda waxaa jira cudur, dhimashada, iyo ugu xumaa ee dembi oo dhan.
kaliya waxaan ka helay iPhone this aan aad u dheer ka hor. Waxaa si fiican u shaqeeyo. Laakiin ka hor inta aan helay this mid cusub oo aan iPhone ahaa mid laga cabsado. Waan ku hoos waqtiga oo dhan, si screen la dillaac. Waxay ahayd runtii gaabis ah. Waxaa had iyo jeer ku burburtay ii on. Ma aanan rabin in ay lacag ka qaataan on mid cusub weli in kastoo. Kasta oo hadda ka dibna aniga qudhaydu waxaan qaadi lahaa ka cabanaya oo ku saabsan sida laga cabsado oo aan phone ahaa. Laakiin markaas waxaan dib u sida taleefannada gacanta ahaan jireen xusuusan lahaa. phone ugu horeeyay ee unugga waxaan ka helay mid ka mid ah kuwa marka hore la screens midabka. Waxaan u maleeyay in ay ahayd la yaab leh.
Laakiinse waayey ilaa iPhone ahaa a million jeer kaga fiican yihiin phone in marka hore waxaan ka helay. Waxa aan aaminsanahay lahaa waa la waayey waxaa laga yaabaa in kor, laakiin waxaa wali la yaab leh. Waxaa laga yaabaa in gaabis ah oo dildillaacay, laakiin waxaad weli u arkaan bidhaaminaya ay amazingness. weli waxaan qaadan kartaa sawiro wanaagsan on. Weli waxaan ka heli kartaa internetka waxa la. Waxaan weli kala soo bixi kartaa, alaabtii waxay ku. Waxaan leeyahay apps iyo ciyaaraha waxa on. Apple sameeyey shaqo la yaab leh oo ku saabsan phone in. phone Taasi ahaa mid yaab leh, laakiin jebisay.
In si la mid ah, Ilaah sameeyey shaqo la yaab leh noo on, laakiin waxaan ka jabay. Haddii aad eegto na at, waxaad weli u sheegi karaa nahay xayawaan cajiib ah, laakiin waxa ay sidoo kale cad in aan jebiyo. waxaana nahay kuwo aan weligiis socon. Waxaan ka heli jiran oo ku dhintay. Waxaan yeeli anqowyada i noo. Waxaan ma had iyo jeer la xasuusto alaab imtixaanada. Waxaan ku dhaawacanto by dadka kale. Oo annaguna waxaannu kugu dembaabo, Ilaah.
Ma u malaynaysaa inaad weligaa ku saabsan xaqiiqada ah in in aad jebisay? Inta badan oo naga mid ah ay maraan nolosheena ahayna nahay wanaagsanyahay. Waxaan is siri maxaa yeelay muuqdaan annagu ma wax ka duwan qof kasta oo kale nagu wareegsan. Laakiin runta waa, oo dhan oo naga mid ah waa jajaban yihiin. Waxaan doonayaa in aan eegno laba siyaabood oo aasaasi ah in aan waa jajaban yihiin.
First, aan jir ahaan jebisay. Markii aan da 'yar tahay aan ku nool nahay hoos aragti ah in aan sameeyno tahay wanaagsanyahay. Oo waxaannu nahay saamaxa in ay qaataan in sababtoo ah waxaan weli ma arko wax calaamado ah oo ka mid ah brokenness. calaamadaha laga yaabaa in yar, laakiin waxaan is ilowsiisid. Waa sida markii aniga iyo xaaskeyga ahaa our Ford Explorer. Waxay bilaabeen in ay u ciyaan, laakiin iyadu kaliya waxaa wadista dhawray. Dhowr usbuuc ka dib waxaan dib ayaa ka eriday Chesapeake Bay iyo wheel u dhow ka qarxay off. Halkii tiray calaamooyinkii, waxaan waa inay ogaadaan oo iyaga ka mid.
Hal qof ee Kitaabka Quduuska ah oo lagu sameeyey ugu dambaysta la ogyahay adduunka naga dhacay Ayuub la odhan jiray. Wax walba waxaa laga soo qaaday isaga oo ka. In dhexe ee baroorta ah oo ku saabsan xaalada uu ka tarjumaysaa on gobolka binu-aadmiga oo dhan. Halkan waxa uu sheegay in:
“Man kuwaas oo ka dhashay qof dumar ah oo waa dhowr ka mid ah maalmaha iyo dhibaato miidhan. Waxa uu ka soo bixi sida ubax oo kale, oo way engegtay; ayuu cararaa sida hoos oo kale oo aan sii.” (Job 14:1-2)
Ayuub waxa uu sheegayaa in maalmood our ma yihiin aan la koobi karayn. Waxaan aadan haysan tiro aan la koobi karayn of sano in ay ku noolaadaan. Waxaan oo dhan u dhiman doonaa maalin maalmaha ka mid. Waxaa laga yaabaa inaan ka soo baxo qurux badan oo kale oo ubax ah, laakiin waxaan u engegay doonaa. Markii uu ka hadlayaa nagu saabsan qallalaa, wuxuu ka dhigan jirkeena si tartiib tartiib ah hoos u xidhay doonaa noo on. Our quruxda libdhi doonaa, oo xumaato. Waxa ay mar walba ma doonayo in sidoo kale ay hadda samayn shaqeeyaan. Oo danbeyn waxaan dhiman doonaa. Oo markuu noo dhigmo hooska, uu xidhiidhka in nolosha tani ma aha mid joogto ah. Waxa uu dhamaado.
Waxaan maanta akhriyo magazine article Time ah xaq u: "Google Xalliyaan karaa Dhimashada?"Maqaalka ka hadlay shirkadda hami iyo sida ay u jecel yahay in ay toogtaan, waayo dayaxa. Waxaa jira ma jirto sayniska iyo tiknoolajiyada in xal u heli karo dhibaatada dhimashada. Waxaa dhacaya. Dhimashadu waa mid dhab ah in Google ma xallin karo.
Sidaas haa, aan la yaab leh ka dhigay. Waxaan nahay qaybta ugu cajiib ah Abuuridda, laakiin tan iyo markii Fall aan ku jejebiyey.
Our brokenness ina xusuusinaysaa in aynaan tahay Ilaah. Waa in aynaan u qaadan in maydadka dhallinyarada ahaa oo hadda ka shaqeeyaan si fiican u yihiin waxa weligeedba waxa aan heli doonaa. Tani waa sabab fiican inoo ah in aanay sugin ilaa wakhti danbe mooye in Ilaah u adeega.
Sidaas jidka ugu horeysay waxaan jebiyey jir ahaan waa. Laakiin waxaan sidoo kale ruuxa jebisay.
"Ma jiro xaqa ah, no, ma ka mid ah; ninna ma garto; mid Ilaah doondoonaa ma jiro. All leexdeen; wada ay buray; ninna wanaag falaa ma, aan xitaa hal. Hungurigooduna waa qabriga furan; ay carrabkooda ku isticmaala inay ku Dhagraan. Iyo mariidka xun ee jilbiska bushimahoodana waxaa ku hoos. Waxay Afkiisa waxaa ka buuxa habaar iyo qadhaadh. Cagahoodu waxay u dheereeyaan inay dhiig daadiyaan; waddooyinkiisa waa hoog iyo ba ', iyo jidkii nabadda ma yaqaaniin. Waxaa jira cabsi Ilaahna indhahooda ma hor taal. " (Romans 3:11-18)
maris Tani waa kitaabkii Romans halkaas Paul bilaabo off hadalka ku saabsan sida qof walba ayaa ku dembaabay Ilaah. Oo halkan, halkaan asal ahaan u sheegay Yuhuuddii, haa xitaa aad. All oo naga mid ah.
“Hubaal nin xaq ah oo dhulka oo sameeya oo dembiyadiinna oo wanaagsan oo marnaba ma aha.” (Ecclesiastes 7:20)
Haddaba sababta aan sida caadiga ah qabaa inaan nahay dad wanaagsan yahay heerka aan u cabbiro by: mid kale. Sidaas dabcan marka la barbar dhigo dadka kale ee aan ahay qof wanaagsan. Ma dilaan dadka. Anigu ma aan ahay argagixiso. Sidaa darteed, Waxaan ahay qof wanaagsan, xaq u? Ma aha sida ay samayso Kitaabka Quduuska ah. Marka laga eego dhinaca aadanaha, Hubi in aad noqon kartaa qof wanaagsan. Laakiin waxa aan waa in si dhab ah ay xiiseynayaan waa aragtida Ilaah.
Oo waxaan dhex mari, runtii waxaan ma ku doodi karaa isaga la. Waa run oo dhan.
Oo aad aragto in uu sameynayo dhacdo in qayb kasta oo inaga mid ah waxaa la waayey ilaa-faham, cunaha, Carrabkooda, bushimihiisa, afka, cagaha, indhaha-dhan oo naga mid ah! Ma nihin dad wanaagsan oo wax xun mararka qaarkood sameeyaan. Waxaan nahay dad dembi leh oo inta badan ku dembaabo,. Waxaan Leeyihiin Quluub buka.
Waxaan marar badan ku odhan doonaa waxaan fahamsanahay runta this, laakiin ma uusan soo xaadirin in habka aan ku nool nolosheena. Waxaan idinku leeyahay, waxaynu og nahay waxa aannu ka jabay, laakiin waxaan tahay dooneyn inay qirto aan nahay xaq xaalad. Marka qof na ku eedeysay, jawaabta marka hore, halkii is-baaro, mar walba waa in la difaaco nafteena. Waxaa laga yaabaa in aan kaliya ku doodi, ama waxaa laga yaabaa aan eedayn iyaga halkii. Haddii aan fahmi aan ka jebiyey, ka dibna waxaa laga yaabaa in aan kaliya waa in nafteena baaro marka hore. Waxaad tahay cilladaysan, taas oo macnaheedu yahay in aad noqon kartaa khalad.
Ama qof sidee ku saabsan this-aan hoos soo fiiriyo on dadka kale ee ay dembi. Sida haddii mid kasta oo inaga mid ah aan la jebiyey oo u baahan Badbaadiyeheenna ah isla. Qofna ma dhihi karo waxay idinka khayr roon tahay, oo ma aad odhan kartaa in aad u khayr badan tahay. Waxay samayn yaabaa in dembiyadooda ka xun aad badan, laakiin aynu ku jirno oo dhan dembilayaasha jabay ee u baahan Badbaadiye oo kaamil ah. Xitaa ka xun, waxaan ku xirnaan nafteena on si aad u hesho samada.
Waxaan leenahay xaalad wadnaha ah iyo waxyaalaha qalbiga ku jira waa halka ay wax walba oo ka timaada. Sidaas awgeed waxa ku dhowaad sida ashuun biyah in uu sumeeyay. galaas kasta oo aad ku shub is sumoobay doonaa. Sidaas qiyaasi in koob oo kala duwan yihiin fikirkaaga, tallaabooyinka, hawadooda, iyo go'aamada. Dhamaan waxa ka mid ah waxaa nijaaseeyey.
Waxaan sidaas oo kale loo dembaajiyey in aanan qabaa inay heshiis weyn, laakiin waa. Dembigu waa wixii naga horjooga Ilaah. Dembigu waa wixii naga nolosha weligeed ah dhawri doonaa. laga yaabaa in aan u malaynayaa in dadka cabsi ama xaalado xun yihiin cadowga ugu xumaa. Our cadowga dhabta ah ugu xun oo nagu samayn karaa dhaawac ugu waa dembi noo gaar ah. Waxyaabaha kale ee noo yeeli kartaa xilli ciyaareed, laakiin sababta oo ah dembigii aan laga yaabaa in lagu ciqaabo weligeedba. Waa dembi in na ka dhigaysa Ilaah buu la col.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah u malaynayaa in aan aan marnaba dembi qatar ah. Laakiin dambiyada ugu xun oo dhan Caalamka waa in ay ku dembaabo, Ilaah. Waxa uu wax badan ka badan awoodda askari bilays ah, ama madaxweynaha. Waxa uu Ilaah! Oo xataa haddii aan la dilay, xaqiiqda ah in aan been weli waa dambi foosha xun ka gees ah Ilaah.
Waxaan nahay sida muraayad ka jabay. Waxaan ka tarjumayaan image Ilaah, laakiinse uma samayn sidii inaannu. Taasi waa waxa aan la sameeyey in ay sameeyaan. Halkii aan ku tuso sawir fool xun ku margado. Love u leexdaa damaca. rabitaan A si ay u bixiyaan jirsado in damac. Ballanqaadka beddelin sanam. Waa dembi oo dhan, oo Ilaah wuxuu neceb yahay.
Waynu u Baahan
Taasi waa warka xun. Waa maxay warka wanaagsan?
Waxaan qabaa dadka wanaagsan oo keliya in Jannada tago, waana run in dareen. Laakiin ma jiro oo naga mid ah waa wanaagsan. Sidaas awgeed, waxaan u baahan tahay in qof kale in aad na siiso wanaaggii. Qof kaasi waa Ciise.
Taas macnaheedu waxa weeye waxaan gelin kartaa rajada in our naftooda jireed ama mid Ruuxa raaca. Waxay tahay jabay oo naga dejisay doonaa. Waxaan ku filan ma tahay. Waxaan u baahanahay Ciise inaad na dib isugu.
Haddii aynu ku kaliya ruuxa jebiyey ama jir ahaan u jabi, waxaa laga yaabaa in aan in ay u muuqato lahaa sida weyn in heshiiska. Just jir, waa wax fiican maxaa yeelay, markaan dhimanno oon aan wanaagsan tahay. Ama kaliya ruuxa, waxaan marnaba yeelan doonaa in ay la kulmaan Ilaah sababtoo ah waxaan weligii ma dhiman doono. Laakiin sida mid aan Ilaah hortiisa quduus ah kii ka xumaaday la dembigayaga istaagi doonaa.
Ma ogtahay in aad tahay mid baahane? Well warka wanaagsan waa in aad ku badbaadi karaan. Waxaa jira Badbaadiye kaasoo buuxiya baahida ugu weyn noo.
"Badbaado waxaa laga helaa mid kale ma jiro, waayo, ma jiro magac kale samada siiyay aadanaha hoos by taas oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno. " (Acts 4:12)
Ciise waa kan keliya soo celin karaa waxa jebiyey. Waa mid ka mid kaliya ee noo mideeyo karaa Ilaah. Waa ayo rajadayada kaliya. Maxaa yeelay, isagu for our caasinimo dhintay. Waxa uu ka soo kacay qabriga. Waxaan gashay biil. Ciise waa dhan bixisay.
Sidaas si aynnu u: qofka aad tahay?
Ilaah ina daneeyaa ku saabsan sababtoo ah waxa uu inaga dhigay. Wuxuu hoos u soo fiirisa oo na aqoonsan lahaa sidii taaj oo ka mid ah uu abuuray. Laakiin arkaa in aan waa kuwa laga cabsado jabay. Waxaan u baahan Badbaadiye.
Waa in aadan u qaadan aad Christian a halkan maanta sababtoo ah aad tagtay kaniisadda. Haddii aadan run ahaantii waxa uu qiray in aad jebisay, in aad Ilaah ka xumaadeen, in aad u baahan tahay Badbaadiye. Haddii aadan jeestay dembi ka. Haddii aadan isku halleeyaa Masiix, ka dibna aadan ilmo Ilaah.
In casharka kan xiga, ayaan ka hadli doonaa oo ku saabsan sida Ilaah na wuxuu qaadanayaa ku galay qoyskiisa. Aynu ku tukado.
SU'AALO FALAQAYN AH:
1. Sidee xaqiiqada ah in Ilaah ka dhigay noo beddelo nolosheena? Waa maxay farqiga u dhigi doonaa Isbuucaan?
2. Sidee u bedesho nolosha ogaa in Ilaah oo dhan arka? Waa maxay farqiga u sameeyaan in Ilaah ugu dambaysta la noo ogyahay?
3. Sidee buu ka dhigi aad dareento in ay ogaadaan aad ku socoto in ay u dhintaan maalin maalmaha ka mid?
4. Sidee brokenness ruuxiga ah noo muujiyaan ilaa nolosheena?
5. Ma xaqiiqda ah in midkayana wanaagga hoose waa waxaan kaliya u aqbalaan oo ku nool jidkaas?
6. Maxay run ahaantii ka dhigan tahay in ay toobad keenaan dembiga iyo aaminsan in Ciise?
Michael qaniinyada • March 4, 2014 at 9:46 pm • Reply
Waa maxay gabal wayn ee aragti iyo baridda. Si deeqsinimo ah u duceeyey waxa by
Allan • March 5, 2014 at 3:36 pm • Reply
Tani waxay aad u ahayd Ilaah ha idiin barakeeyo good.May.
Glore • March 6, 2014 at 11:23 waxaan ahay • Reply
Bro Love. Waxaan aad caan ku ah aad music and talented duurka in aad. khudbada Great. ma sugi karo soo socda.
Sulaymaan King • March 12, 2014 at 6:27 pm • Reply
Waxaan dareemayaa barakaysan, Waxaan ahay mid la barakeeyey!
Ma sugi karo qayb ka mid gebogebaynta.
Ilaah ha barakeeyo, Trip.
MichaelSmith • March 14, 2014 at 12:34 pm • Reply
Trip, waad ku mahadsan tahay isagoo music adag sida inay dhegaystaan, iyo mahad waxbarista kuwan. Iyagu way ka weyn in ay dhegeystaan ​​buu u leeyahay waxbaridda iyo dhiirigelin, Waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay sii socoto inuu idin barakeeyo, iyo in maalin maalmaha ka mid ah ayaan heli in ay la kulmaan wax bara in qofka.
Payne • March 19, 2014 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Tani waa weyn! Marka xiga 2 videos la sii daayay?
Juan • March 19, 2014 at 10:49 pm • Reply
safarka fariin Great jacayl marnay sida aad u dhan isugu kasta oo ku saabsan waa weyn in la ogaado in aan si qurux badan u sameeyey Ilaah si deeqsinimo ah adiga iyo qoyska barakeeyo
Ariel • March 25, 2014 at 7:39 pm • Reply
Tani waa sida khudbad weyn. Runtii iga caawiyay ogaaday in fikirka jidka qudhayda runtii waa khalad. Ilaah waa run ahaantii aad u isticmaalaya!
sidoo kale Christian • April 23, 2014 at 1:16 waxaan ahay • Reply
Leo • December 11, 2015 at 10:43 pm • Reply
aad u wanaagsan, preachings iyo dhallinyarada u baahan tahay!